Accerciser: ziva chirongwa chekuita bvunzo dzekuwanika | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, Desks, Resources
Accerciser software inokutendera kuti uedze kuwanikwa kwenzvimbo yako. Iyo yakavhurwa sosi uye yakanyorwa muPython. Shandisa raibhurari yeAT-SPI kuongorora, kuongorora, uye kududzira mawijeti munzvimbo kuti uone kana kunyorera kuchipa ruzivo rwakakodzera kubatsira uye nekugona tekinoroji
La graphical mushandisi interface Accerciser inoratidza zvikamu zvitatu zvakasarudzika nekutadza. Kune rimwe divi kune iyo hierarchical muti kuona kweanowanikwa mune desktop desktop, uye kune rimwe divi une nzvimbo mbiri dzekuwedzera-ons. Zviripachena, rutsigiro rwekuwanika runofanira kuve runogoneswa munzvimbo yako yedesktop kuti rishande.
Accerciser inogona kubatsira zvakanyanya kune avo vanofanirwa kuongorora kuwanikwa kwesystem. Kunyanya kunyanya vashandisi interface vanogadzira Ivo vanozogona kuyedza kwavo kuvandudza uye kuve nechokwadi chekuti software yavo inofambisa kuwanikwa kuti munhu wese agone kuishandisa pasina matambudziko. Vachaita izvi nekutarisa izvo AT-SPI zvaizopa mumaapps avo nema automated bvunzo ayo anowana akajeka.
Accerciser ine yakawedzera plug-based dhizaini. Saka mazhinji emabasa acho zvishongedzo:
Interface muoni: iplagi yekuongorora AT-SPI maficha kune yega yega inowanikwa widget yeapp.
AT-SPI inogonesa: imwe plugin yekuisa bvunzo kuratidza kugona kweapp.
Chiitiko chekutarisa: kuratidza zviitiko kubva kuAT-SPI raibhurari yakaburitswa neapp irikuedzwa.
Kurumidza kusarudza: inopa mapfupi ekhibhodi.
API browser: plugin kuratidza inowanika maficha, nzira uye hunhu hwega roga widget.
IPython koni: imwe yekupa iyo Python Shell yekuwana widget.
Kana uchifarira ziva uye shandisa Accerciser, ipapo unogona kuwana rumwe ruzivo pa peji ino. Kune rimwe divi, kana iwe uchida kuiisa, inowanikwa mune akawanda marekodhi eakakurumbira distros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Accerciser: ziva chirongwa chekuita bvunzo dzekuwanika
Pop! _OS 21.04 ikozvino yavapo nharaunda yayo nyowani "Cosmic"
Linux nevashandisi vekumba. Mukana wedu wekupedzisira (Opinion)